डेंगु रोक्नका लागि लामखुट्टेसँग लामखुट्टे नै लड्ने ! ७५ करोड लामखुट्टे प्रकृतिमा छोडिँदै – Sanchar Patrika
डेंगु रोक्नका लागि लामखुट्टेसँग लामखुट्टे नै लड्ने ! ७५ करोड लामखुट्टे प्रकृतिमा छोडिँदै
August 22, 2020 102
काठमाडौं। अमेरिकाले डेंगु नियन्त्रणको लागि लामखुट्टेसँग लामखुट्टेलाई नै भिडाउने तयारी गरेको छ । अमेरिकाको फ्लोरिडामा ७५ करोड जेनेटिकली मोडिफाइड (जैविक रुपमा पुनर्संरचना गरिएका) लामखुट्टे प्रकृतिमा छोडिनेछन् । स्थानीय स्तरमा जीका भाइरस र डेंगु फैलाउने प्रजातिका लामखुट्टेको संख्यामा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो गर्न लागिएको हो । वर्षौंदेखि पर्यावरण विशेषज्ञहरुबीच यसरी ठूलो संख्यामा लामखुट्टे प्रकृतिमा छोड्दा स्थिति बिग्रियो भने जिम्मेवार को हुने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । यद्यपि अहिलेको लागि यो पाइलट प्रोजेक्टले स्वीकृति पाइसकेको लाइभ र्सान्सको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
यसका लागि प्रयोगशालामा विशेष किसिमका लामखुट्टे तयार गरिन्छन् जसको शरीरमा एक विशेष किसिमको प्रोटिन हुन्छ । यी लामखुट्टेलाई जेनेटिकली मोडिफाइड लामखुट्टे भनिन्छ । भाले लामखुट्टे कहिल्यै पनि कुनै रोग फैलाउने कारण बन्दैन किनकि भाले लामखुट्टेले कहिल्यै पनि मानिसलाई टोक्दैन । भाले लामखुट्टे आहारको लागि फूलको रसमा निर्भर रहन्छ । मानिसलाई टोक्ने र प्राणघातक रोग फैलाउने काम पोथी लामखुट्टेले गर्छन् ।
जेनेटिकली मोडिफाइड लामखुट्टेलाई ती स्थानमा छोडिन्छ जहाँ पहिले नै लामखुट्टेको संख्या अधिक छ । जेटेटिकली मोडिफाइड लामखुट्टेले त्यहाँ पहिलेदेखि भएका पोथी लामखुट्टेको साथमा प्रजनन गर्छ । मोडिफाइड भाले लामखुट्टेमा खास किसिमको प्रोटिन हुनेछ जो प्रजननको क्रममा पोथीको शरीरमा पुग्नेछ । यसको कारण नयाँ जन्मिने पोथी लामखुट्टे मानिसलाई टोक्ने उमेरसम्म पुग्नुभन्दा पहिल्यै मर्नेछन् । भाले लामखुट्टेको जीन अर्को पीढीमा पुग्नेछ र विस्तारै पोथी लामखुट्टेको संख्या घट्नेछ । केही समयपछि मानिसमा डेंगु, जीका, चिकनगुनिया जस्ता रोगको दर पनि घट्नेछ ।
गएको मे महिनामा अमेरिकी वातावरणीय एजेन्सीले बेलायतको कम्पनी अक्सिटेकलाई जेनेटिकली मोडिफाइड लामखुट्टे तयार गर्ने अनुमति दिएको थियो । प्रयोगशालामा भाले एडिज इजिप्सी लामखुट्टे तयार गरिनेछन् जसको लाम ओएक्स ५०३४ राखिएको छ । यिनीहरुलाई २०२१ मा फ्लोरिडाको एक टापुमा छोडिनेछ दुइ वर्षको अवधिमा कूल ७५ करोड लामखुट्टे छोडिनेछ ।
Nextसिरहामा मृ-त्युपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि, मलामी गएका गाउँले त्रसित